Praiminisitra Ntsay Christian: “Tsy azo ihodivirana ny fanovana ny fitantanam-panjakana” | NewsMada
Praiminisitra Ntsay Christian: “Tsy azo ihodivirana ny fanovana ny fitantanam-panjakana”
Ho sahirana ireo zatra ny lalan-dririnina. Mitohy ny hetsika fanovana eo amin’ny sehatra samihafa tanterahin ’ny fitondrana. Anisan’izany koa ny fitantanan-draharaham-panjakana.
“Tsy azo ihodivirana intsony ny fanovana tokony hapetraka eo amin’ny fitantanana ny raharaham-panjakana ankapobeny. Tsy maintsy misy ny fanovana ao anatin’izany. Tsy maintsy hisy koa ny fanatsarana.”
Izay ny fanazavan’ny Praiminisitra Ntsay Christian momba ny famelabelaran-kevitra nataony nanokafana ny taom-pianarana, taona 2019-2021, eo anivon’ny Sekolim-pirenena momba ny fitantanan-draharaham-panjakana eto Madagasikara (Enam), Androhibe, afakomaly. Miara-dalana amin’izany ny fidiran’ny andiany faha-28, ahitana mpianatra 196, mitsinjara amina sampam-pianarana fito.
Tsy maintsy entina amin’ny fijerena ny olana rehetra misy sy tsapa fa mamono ny raharaha ho an’ny vahoaka izay fanovana atao izay, araka ny nambarany. Tsy maintsy manana fomba fiasa vaovao izany, mifantoka bebe koa amin’ny fahazoana vokatra. Ao anatin’izany koa ny fametrahana ny fomba hahazoana mametraka ny rafitra hanaovana tombana ny fahavitrihana amin’ny asa rehetra atao eto. Idirana tsikelikely ny fampiharana izany.
Mbola ambany ny fandrosoan’ny raharaha ho an’ny vahoaka
Amin’izao fotoana izao, tsy rariny raha ambany dia ambany ny tahan’ny fampandrosoana eo amin’ny sehatry ny raharaha ho an’ny vahoaka. Raha ny fahitana ny kolikoly sy ny hosoka amin’ny raharaham-panjakana rehetra, tsy maintsy ovana izany rehetra izany. “Izay ny nisintonako lakolosy androany amin’ny tsy maintsy anaovantsika fanovana”, hoy izy.
Hidirantsika sy hiarahantsika izany fanovana izany amin’ny taona ho amin’ny fampandrosoana. Efa mazava ny lalan’ny fampandrosoana: ny politika ankapoben’ny fanjakana amin’izao fotoana izao. Nefa ny olombelona no ivon’izany rehetra izany. Anisan’ny olombelona tsy maintsy jerena ireo mpitondra sy tomponandraikitra maro eo amin’izay asa aman-draharaham-panjakana izay.
Ny fanovana tokony hipetraka eto anivon’ny firenena hahazoana manosika ny zotram-pampandrosoana eto Madagasikara. “Tsy hisy fampandrosoan hahomby eto, raha tsy ny raharaham-panjakana ankapobeny no miatrika izany fanamby rehetra izany”, hoy ihany izy.